२ सन्तानकी आमा बिमकलाले अस्पताल बाट किन फिल्मी शैलीमा बच्चा चोरीन ? पक्राउ पछि खुलाईन कारण !
काठमाडौं- “जन्मेको चारघण्टामै पाल्पाबाट हराएको नवजात शिशु स्याङजाको मिर्मीमा फेला परेको छ ।” पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा जन्मिएको बच्चा चारघण्टामै चोरी भएको थियो । ंशुक्रबार दिउँसो पाल्पाबाट हराएको बच्चा शनिबार बिहान स्याङ्जाको मिर्मीमा सकुशल फेला परेको हो । शुक्रबार सुत्केरी बेथा लागेर पाल्पा ंतानसेन ९ की २२ वर्षीया जमुना राना लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी थिइन् ।
जमुनाले शुक्रबार दिउँसो नै छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् । सुत्केरी रानासँगै उनकी आमा र श्रीमान् समेत साथमा रहेका थिए । सुत्केरी जमुना अर्धचेत अवस्थामा उनकी आमा छोरीलाई ज्वानोको झोल ल्याइदिन बच्चा काखमा राखेर मेडिकल कलेजकै क्याण्टीनमा गएकी थिइन् । उनीसँगै एकजना अपरिचित महिला पनि सँगै गइन् । सँगै गएकी ती अपरिचित महिलाले सघाउन भन्दै शिशु समातेको र आफूले ज्वानोको झोल लिएर छोरी समक्ष पुग्दा ती महिला नआएको सुत्केरी जमुनाकी आमाले बताइन् ।
लामो समय सम्म पनि शिशु लिएर नआएपछि खोजी गरिएको सुत्केरीकी आमाले बताईन् । सुत्केरी जमुना, श्रीमान र आमा सीधा स्वाभावका कारण चार दिनदेखि बच्चाको खोजीमा अस्पताल आएकी विमकला पाण्डेले उनीहरुको सीधापन र अस्पतालका कर्मचारीहरुको चरम लापरवाहीको फाईदा उठाउदै बच्चा चोरेकी थिईन् । अस्पतालको नजिकै रहेको प्रहरी चौकी अगाडिबाट पोखराको बसमा उनी स्याङ्जाको जीरोका लागि ३ः३० बजे त्यहाँबाट हिडेको स्रोतले जनाएको छ । विमकला ५ः३० बजे राम्दी हुँदै गल्याङ्गको जीरोमा पुगेकी थिईन् । जीरोमा उनले जीप फेला पारिन र राती ७ः१५ बजे र्मिमीको एनईइको (विद्युत् प्राधिकरण) क्याम्पमा रहेको कर्मचारी क्वाटरमा पुगेकी थिईन् ।
“कसरी भेटियो त मिर्मीमा ?”
रिपोर्टिङमा पुगेका पाल्पा जनचेतना दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादक जगदिश भट्टराईले सीसीटीभी फुटेज हेरेर शंकास्पद महिलाको पहिचान गरेको जानकारी दिएका थिए। बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “मैले सीसीटीभी फुटेज हेरेर शंकास्पद महिलालाई कतै देखेजस्तो लाग्यो । उनका बारेमा बुझ्दै जाँदा गुल्मीमा रहेका आफन्तसहित धेरैजनालाई टेलिफोन गरेपछि एकजना महिलाले बच्चा लिएर मिर्मी पुगेको भन्ने जानकारी पाएपछि म लगायत केही साथिहरु राति मै मिर्मी पुग्यौं ।” बच्चा चोरी गर्ने विमकला मिर्मीमा रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्थलमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणमा सरसफाईको काम गर्ने उनले जानकारी दिए ।
“हामी राति नै मिर्मी पुगेर ती महिलाले बच्चा ल्याएको– नल्याएको भन्ने विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्‍यौं । उनले बच्चालाई ल्याएर तेल लगाएर राम्रोसँग राखेकी छन् तर उनी सुत्केरी होइनन् भन्ने जानकारी पाएपछि मात्रै प्रहरीलाई खबर गर्‍यौं । तर पनि प्रहरी आउन ढिला गर्‍यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै खबर गरेपछि प्रहरी आएर विमकलालाई नियन्त्रणमा लियो,”भट्टराईले भने । फेला पारेका बच्चा जमुनाकै भएको पुष्टि भएको थियो । उनको हातमा लगाइएको लुम्बिनी मेडिकल कलेजको छापसहितको नाम कायमै रहेकाले बच्चा जमुनाकै भएको पुष्टि भएको थियो । शनिबार बिहान ंपक्राउ परेकी विमकलालाई पाल्पा ल्याइएको छ ।
बच्चा चोर्ने महिला को हुन ?
स्याङ्जा गल्याङ्ग नगरपालिका ५ डुम्रीचौर स्थायी घर भएकी ४५ वर्षकी विमकला पाण्डे एक दशक अघिदेखि कालीगण्डकी ए परियोजनाको ड्याम साईडको क्वाटरमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाई गर्ने कर्मचारीका रुपमा कार्यरत थिइन् । उनी त्यही क्वाटरमा बस्दै आएकी थिईन् । उनले एक वर्ष अघि दाङ्गका एक युवकसँग (दोस्रो) प्रेम विवाह गरिन् । तर ती युवक अहिले विदेशमा छन् । विमकलाका पहिलो पतिको केही वर्ष अघि मृत्यु भएको थियो । पहिलो श्रीमान् तर्फका दुई छोरीहरु ठूलै भई सकेका छन् । उनले पछिल्लो समय सामजिक सञ्जालको माध्यमबाट सम्पर्क बढेपछि प्रेम विवाह गरेकी थिईन् ।
विमकलाले पुत्र प्राप्तिको आश र पछिल्लो श्रीमानको सम्पति प्राप्त गर्ने लोभ जागेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। त्यसैले गर्दा उनी एक सातादेखि बच्चाको खोजीमा भौतारिईरहेकी थिईन् । प्रहरीको अनुमानबअनुसार पछिल्ला श्रीमानसँग उनले तपाईको गर्भ मेरो पेटमा छ भनेर आठ महिना अघि फोनबाट खबर गरेको तर उनी गर्भवती नभएका कारण उनले नवजात शिशु चोर्ने जुक्ति निकालेकी थिईन् ।